Home > safarka Europe > Maxaad Tareenka waa mid ka mid Hababka ugu badbaado badan Of Gaadiidka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 11/12/2020)
noocaas ahi waxay ku saabsan tababar oo ay kasoo horjeeddo baska ee Europe waa mawduuc aan dhamaanayn, qof kasta uu helay ay opinion gaar ah oo ku saabsan. laakiin, aan xitaa hadalka ku saabsan ammaanka, oo haddii aynu nahay - oo ku filan waa? Ammaanka gaadiidka our doortay waa in had iyo jeer inuu horta yimaado, maantana waanu ka hadlaynaa. Sida caadiga ah, dadka u muuqdaan in ay u dhawaanina this topic duwan, ku xiran tahay u kala jeceshahay safarka ay. dheeraad ah, Wararkii Ugu Danbeeyay waxaan maqli ku saabsan shilalka agagaarka factor dunida ee, sidoo. Inkasta oo dhif ah waxaad maqli doontaa waxaa jiray shil tareen meel, dhacdo. Sida sameeyaa leh hawada, baabuur, baska iyo siyaabo kale oo ka mid ah gaadiidka. sidaas oo kale, tirakoobka waa cad - rasmi ah, tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu ammaanka badan ee gaadiidka maalmahan! isla heerka ammaanka aado gaadiidka hawada halka dhammaan siyaabo kale oo ah gaadiidka daba yimaado.
Tareenku ma yahay mid ka mid ah Hababka ugu Nabdoon ee Gaadiidka Dhamaan Dalalka?
No, ma ahan. oo dhan biraha iyo tareenada ma aha kuwo leh tayo la mid ah. Marka aan ka hadlo badbaadada safarka tareenka, waxaan sida caadiga ah la hadal oo ku saabsan in macnaha guud ee dalka gaar ah. Guud ahaan, safarka tareenka waa mid aad u ammaan ah, laakiin waxa ay weli ku yeelo ma hubinta gobolka ee biraha iyo isku xirnaanta ee dalka, haddii aad rabto in aad raacayso tareen.
Marka waddooyinka tareennada iyo tareenada labaduba waa ku filan la daryeelo (i.e., si joogto ah loo dayactiro, hayo, bedelay marka loo baahdo, iwm), aad dhif abid markhaati doonaa shilalka wax taasi ka dhigan tahay gaadiidka. Mid ka mid ah sababaha ay tahay in, ka duwan gaadiidka ee waddooyinka, waxaa jira hab kaliya oo ka mid ah hab safarka (i.e., tareen) ka dib markii mid ka mid ah wadada ay caga final. No baabuurta lama filaan ah waxaa aad jidka soo socda, samaynta inaad lumiso gacanta giraangirta. Ma jiraan wax gelinba iyo markooda lama filaan ah, iyo xaalado kale oo walaac laga yaabo inay halis. Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah sababaha gaadiid tareen ayaa ku hadhay mid ka mid ah hababka ugu ammaanka badan ee gaadiidka iyo haatan.
Haddii aan si is barbar tareenka la wadooyinka iyo gaadiidka hawada, waxaan si fudud u soo bandhigi lahayn in Tareenku ka mid yahay Hababka ugu Badbaadada Gaadiidka laakiin sidoo kale inbadan waara ka badan noocyada kale ee gaadiidka. Sidee? Tareenadu ma soo saaraan sida badan CO2 qiiqa, iyo tareen qiiqa aan si toos ah u sii daayo hawada sare. Plus, tareenada ha u Cunina tamar badan ama meel, iyo heerarka qaylada ay yihiin wax ka yar hababka kale ee gaadiidka. Inta badan rakaabka ka shaqeeya bey’ada waxay doortaan tareenada safarka habka xulashadooda. Socotada Yurub, sidoo kale, jeceshihiin bey'ada saaxiibnimo ah ee tareenada ay la socdaan warar ammaanka ay.
Maalmahan, markii qof kasta uu ka badatay iyo boodayaa ka kursiga gaariga ay ay kursiga shaqada iyo qeybsanaan ku xigeenka, isagoo mar qaboowga qaar ka mid ah ee u dhexeeya waa muhiim. Lahaanshaha fursad ay ku nastaan ​​on tareen sida aad ku noolayn xaqiiqdii waa mid ka mid ah sababo badan oo dadka dooran tareenada.
Isagoo ka hadlayay of tareenada long-distance, iyagu waa doorasho cajiib ah in ay u safraan sida ay u oggolaan maqnaa qaar ka mid ah. Helitaanka ka barta A hal dhibic B ee 2 saacadaha diyaarad wax ku ool ah, laakiin waa u ammaan u ah caafimaadkaaga? Ma ka doodid our post blog “Tareenka waa mid ka mid Hababka ugu badbaado badan Of Gaadiidka”? Ma awoodaa jirkaaga iyo maskaxdaada farsameeyo isbedelka lama filaan ah cimilada, cadaadiska Hawada, iyo wax kasta oo kale in u dhexeeya? Waa dhib in. Tani waa sababta ay u safraya tababar ku wareegsan Europe jirkaaga siineysaa fursad uu ku qabsado isbedelada iyo iyaga ka arrinsashada in a hab caafimaad.
Ma aha si goan caafimaadka ama ammaanka ah lacagta, Laakiinse guusha boorsooyinka kaalin quruxsan muhiim ah oo rakaab ah qaar ka mid ah. wax dhib ah maleh haddii aad pack fudud in safarka ama maya, aad rabto in aad boorsooyinka ee isku waslad. safra intooda badan waa kuwa aruuriya of artifacts qaali ah, figurines, documents, iwm. oo ay doonayaan xusuus iyaga la jiray. Nasiib darro, safarka hawada waxaa caan ku ah boorsooyinka lumay iyo kuwa dhaawacmay ee dhif dhaca marka aad tareenka ku safarto. Plus, boorsooyinkaaga had iyo jeer waa inaad la, sidaas darteed qofna ma waxaa dhufsan karo sheegashada Alaabtoodii. Ma this sababta in la yidhaahdo tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu ammaanka badan ee gaadiidka? Waxaan sidaas u malaynayso.
#modesoftravel #ammaan #safetravel #gaadiidka